Kenya oo Xabsiga dhigtay Gudoomiyihii Gaarisa iyo Eedaymo la yaab leh iyo Maxkamad lagu saaray Nairobi | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka Kenya oo Xabsiga dhigtay Gudoomiyihii Gaarisa iyo Eedaymo la yaab leh iyo...
Kenya oo Xabsiga dhigtay Gudoomiyihii Gaarisa iyo Eedaymo la yaab leh iyo Maxkamad lagu saaray Nairobi
Maxkamad ku taalla Magaalada Nairobi Caasimadda dalka Kenya waxaa barqonimadii maanta la horgeeyay Guddoomiyaha Ismaamulka Gaarisa Cali Bunow Qorane oo shalay laga waday Magaaladaas.
Bunow ayaa loo heystaa dacwad ka dhan ah Musuq lagu eedeeyay kadib markii Koontada Dowladda uu ka saaray lacag loo qorsheeyay in lagu dhiso Suuqa Qoraxey iyo Waddooyin muhiim ah isu socodkooda.
Dacwad oogaha Kenya Nuurdiin Xaaji ayaa todobaadkaan jaray warqadda xiritaanka Cali Bunow Qorane Guddoomiyaha Magaalada Gaarisa iyo rag oo katirsan maamulka la shaqeeya oo wax laga weydiinayo lacagtaas la musuqay.
Shalay waxaa waday Ciidamo Booliis ah oo xitaa ka reebay dadkii la shaqeynayay, saraakiishu waxa ay ku doodeen in ay heystaan warqad maxkamad oo ay ku xiri karaan Guddoomiyaha Gaarisa.
Markii maanta la horgeeyay Maxkamadda waxaa la weydiiyay musuqa lagu eedeeyay, balse waa uu ka jawaabay, isaga oo beeniyay dhammaan eedahaas, isla markaana iska difaacay su’aalaha kulkul ee la weydiinayay.
Maxkamadda Milimani ee Magaalada Nairobi waxaa joogay xubno kala duwan oo katirsan Dowladda Kenya sida xafiiska Dacwad oogaha iyo guddiga anshaxa iyo la dagaalanka Musuqa dalkaas u qaabilsan.
Lacagta lagu eedeeyay maamulka Cali Bunow Qorane ayaa gaadheysa ($2,153,489) (Labo Milyan, Boqol, toban iyo shan kun, afar boqol, siddeetan iyo sagaal doolar). Iyo Inuu ku guuldareystay maamulka lacagihii Dadweynaha Ismaamulka Soomaalida-Kenya oo uu musuqmaasuqay iyo In uu si gaar ah uga xooleystay dhaqaalihii loogu talo-galay La dagaalanka cudur-ka COVID19.